3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများ PLA အပစ္စည်းကိုသိ - တရုတ် Cixi Lanbo ပုံနှိပ်
ကို ABS နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ
ကို ABS နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ / 1.75 / 1KG
ကို ABS နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ /1.75/ 2KG
ကို ABS နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ /2.85/ 1KG
ကို ABS နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ /3.0 / 1KG
PLA နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ / 1.75 / 1KG
PLA နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ / 1.75 / 2KG
PLA နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ / 2,85 / 1KG
PLA နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ /3.0/ 1KG
PLA ၏ transparent spool
3D ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများ PLA အပစ္စည်းကိုသိရ
တရုတ်ပလပ်စတစ်လျှင်အတော်များများဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဆွေများကငါ့ကိုမေးနေတာပါလား? ဤတွင် PLA ယနေ့ကဘာလဲဆိုတာအကြောင်းကြမ်းတမ်းဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။
polylacticacid: PLA အဖြစ်ကျမ်းစာလာသည်နှင့် polylactic အက်ဆစ်၏အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Polylactic အက်ဆစ် (PLA) ထိုသို့သောပြောင်းဖူးအဖြစ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစက်ရုံအရင်းအမြစ်များကိုတို့ကအဆိုပြုထားသောကစီဓါတ်ကုန်ကြမ်းကနေဖန်ဆင်းတော်တစ်ဝတ္ထု biobased နှင့်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကစီဓါတ်ကုန်ကြမ်း High-သန့်ရှင်းစင်ကြယ်လက်တစ်အက်ဆစ်ထုတ်လုပ်ရန်စိမ်ကြသည်, ထို့နောက်တစ်ဦးအခြို့သောမော်လီကျူးအလေးချိန် polylactic အက်ဆစ်ဓါတုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်ဂလူးကို့စရရှိရန် saccharification ဖြင့်ရရှိသော, ပြီးတော့ glucose နှင့်အချို့သောရောဂါပိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းသောဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးရှိပါတယ်။ အသုံးပြုမှုပြီးနောက်ကလုံးဝအချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်သဘောသဘာဝအတွက်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိကြောင့်ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးနှင့်နောက်ဆုံးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေမကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ရေ, ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရန်အလွန်အကျိုးရှိသောသည်နှင့်တစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတပစ္စည်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ခဲ, ပြဒါး, သယံဇာတ, ခရိုမီယမ်, biphenyl နှင့် diphenyl အီ၏ရလဒ်များကိုကန့်သတ်္ထုများအသုံးပြုမှုအပေါ် 11 နှစ်အီးယူညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီခဲ့နိဂုံးချုပ်များနှင့်နမူနာ 001 ၏ရလဒ်များကိုတွေ့ရှိမခံခဲ့ရပါ။ အဲန်ဒီ dected မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးအထက်ပါစစ်တမ်းများ PLA ကောင်းတစ်ဦးပစ္စည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုအမှန်ပင်လူတိုင်းအလွန်ကြီးစွာသောစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သတိထားဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။
ငါ့ကိုအချို့သောချို့ယွင်းချက်နှင့် PLA ၏ဝှက်ထားသောအန္တရာယ်များအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ PLA မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်မရှိ, ကအခြေခံအားဖြင့်ပတ်ပတ်လည်ကို 60 °ပုံပျက်သောမှစတင်ခဲ့သည်။ တစ်အစားအစာမှိုကြောင့်ကုသအအေးဖြစ်ရမည်; တရုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုအားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်ဖြစ်သော, ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပေမယ့်, ကထုတ်ကုန်-တန်းအရာ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းလိုအပ်သည်။ တာရှည်ခံအတိုဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်၏ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါကမြင့်မားသောအပူချိန်အရည်ပျော်သောကွောငျ့ကအမှုန်ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်ဟုအမှုန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ Non-အဆိပ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီနည်းနည်း PM2.5 အ, ရေရှည်အသက်ရှူသို့မဟုတ်လူ့အဆုတ်အချို့ပျက်စီးမှုကဲ့သို့ဖြစ်၏ပေမယ့် ဒါကြောင့် 3D ပုံနှိပ်အာကာသပိုကောင်းလေဝင်လေထွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်, PLA လူတိုင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူသုံးနိုငျတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြွေးကြော်သံများအော်ဟစ်ခြင်း, နည်းပညာလက်တွေ့အသက်, အိပ်မက်ကနေ 3D ပုံနှိပ်ပြောင်းလဲ!
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-16-2018
Shenwu တောင်လမ်း, Kandun လမ်း, Cixi, Ningbo, Zhejiang, တရုတ်